PlayOnLinux kana maitiro emitambo yako yaunofarira Windows mitambo paLinux | Kubva kuLinux
PlayOnLinux kana maitiro emitambo yako yaunofarira Windows mitambo paLinux
Playonlinux chishandiso chinokutendera iwe kumisikidza nekumhanyisa yakawanda yemitambo uye zvinoshandiswa pakutanga zvakagadzirirwa Windows.Sezvo isu tese tichiziva, panguva ino mashoma mitambo yakakurumbira yakagadzirirwa kumhanya pasi peLinux uye, zvirokwazvo, ichi ndicho chimwe chezvinhu izvo inoodza moyo vashandisi vazhinji kubva mukuwedzeredza kuLinux. PlayOnLinux inounza kuchanza chedu ruoko a mhinduro kudambudziko iri, pasina mutengo werudzi rupi zvarwo uye kuburikidza nekushandisa mahara software.
1 PlayOnLinux maficha makuru
PlayOnLinux maficha makuru
Haufanire kunge uine kopi kana rezinesi reWindows kuti ushandise PlayOnLinux.
PlayOnLinux yakanyatsovakirwa paWine, saka zvese zvayakanakira uye mabhenefiti akagovaniswa, kunyangwe ichichengetedza mushandisi wakajairika kure nechero kuomeswa kumisikidzwa.
PlayOnLinux ndeyemahara software
PlayOnLinux inogadziridzwa muBash nePython
Iyo zvakare ine zvimwe zvikanganiso, senge ese software:
Dzimwe nguva, iwe uchaona kudzikira mukuita (mufananidzo unogona kunge usingaite mvura uye magiraidhi asina kunyatsotsanangurwa)
Iyo haitsigire YOSE mitambo, kunyangwe ichitsigira huwandu hwayo.
Neraki, PlayOnLinux ine masisitimendi kune angangoita ese ma distros. Avo vasingashandisi Ubuntu vanogona kuwana iyo yekuisa mirairo pano:
Vashandisi veUbuntu vanogona kuisa inoenderana DEB package kana kuwedzera iyo PlayOnLinux repositories:
Pasuru: @ http://www.playonlinux.com/script_files/PlayOnLinux/3.7.7/PlayOnLinux_3.7.7.deb
Kuti ndiwedzere zvinyorwa, ndakavhura terminal ndokutaipa zvinotevera:
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_lucid.list -O /etc/apt/source.list.d/playonlinux.list sudo apt-tora sudo apt-tora kuisa playonlinux
Paunotanga PlayOnLinux kekutanga, iwe uchaona kuti iyo huru skrini yechirongwa ichaonekwa isina chinhu. Izvi zvinoitika nekuti yakawanda nzvimbo yakachengeterwa kunyora mashandiro nemitambo yauri kuisa.
Kuisa application / mutambo, tinya bhatani gadza.
Iyo yekumisikidza dialog ichaonekwa. Kubva ipapo iwe unozogona kusarudza iyo application / mutambo wekumisikidza, kungave nekutsvagisa zvikamu kuruboshwe kana nekuzvitsvaga kuburikidza neinjini yekutsvaga iri pamusoro pehwindo.
Paunenge uchinge wawana mutambo / application yaunoda kuisa, sarudza iyo wobva wadzvanya bhatani aplicar.
Iyo mutseki yemutambo. Kunze kwekunge iwe uri kuisa chigamba cheyakaisirwa kuiswa chishandiso, vazhinji vanogadza vachatanga ne "mharidzo." Tevere, dhairekitori rinozogadzirwa umo PlayOnLinux ichaponesa mafaera ese echirongwa chiri mubvunzo.
Mushure meiyi poindi, zvinhu zvinoverengeka zvinogona kuitika: mugadziri anogona kutanga iyo kusununguka yemutambo, ingangoda iyo mutambo wekuisa mafaera, ingangoda iyo Mutambo CD / ISO, nezvimwewo, zvinoenderana nezvakaiswa mumutambo wekumisikidza script. Mimwe mienzaniso inosanganisirwa muzvidzitiro zvinotevera:
Pane imwe nguva, PlayOnLinux inomhanya iyo yekushandisa / yemitambo yemuno Windows installer. Chimwe chinhu chakakosha kuchengeta mundangariro ndechekuti, dzimwe nguva, iyo PlayOnLinux yekumisikidza zvinyorwa zvinoda kugadzirisa iyo yekumisikidza kana yapedza, saka zvinokurudzirwa zvikuru kuisa mumakwara akasimbiswa nekusarongeka, uye uchishandisa masisitimu anouya asipo. Kamwe iyo inosimudza painopedza basa rayo, PlayOnLinux icharatidza yekupedzisira dialog yekuona kupi kwekugadzira mapfupi yemutambo.
Kana iko kumisikidza kwapera, iwe uchaona iyo hombe PlayOnLinux hwindo zvakare uye mutambo / application iri mubvunzo inofanirwa kunge yakawedzerwa kune irwo runyorwa rwezvirongwa zviripo. Nekuti mhanyisa chirongwa ingoisirwa, ingo sarudza iyo uye baya bhatani Mhanya. Iwe unogona zvakare kubaya kaviri pachirongwa, kana kuchimhanyisa kubva kudimbudzira kwakagadzirwa neanosimudza.
Chekupedzisira, rudo nemitambo yese rwunopera uye nenguva inosiririsa yake bvisa. Kuti uite izvi, sarudza icho kubva pane chinyorwa uye baya bhatani Bvisa. Ndokumbira utarise kuti kunyangwe mafaera ese uye marongero akachengetedzwa muRegistry achadzimwa zvachose, haasi mapfupi epurogiramu anogona kubviswa zvakanaka. Zvisinei ... ichafanirwa kuitwa "nemaoko".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » PlayOnLinux kana maitiro emitambo yako yaunofarira Windows mitambo paLinux
Emmanuel Miranda akadaro
isu tinofanirwa kuve nemutambo disc hongu kana hongu?
Pindura kuna emanuel miranda
CHII VERSION YEMAONI YEMAHARA UINAI NEKUTI PAKUZOVA NEZVIWANDA VERSION
unobvuma kutsemuka uye zvigamba zvemitambo here?
uye ndingaishandisa sei?
Ehe saizvozvo. Iyo michina yakafanana neyakagara. Tsvaga dhairekitori uko mutambo wakaiswa uye teedzera iyo kutsemuka Kana mhanya mutambo, mhanyisa keygen, uye isa kiyi, nezvimwe.
Zviri nyore. Mufaro! Paul.
ps: zano, zvirokwazvo mitambo yacho inochengetwa mune yako HOME / .wine folda
Ah, maita basa
ipapo ndinoona kuti zvakafanana nekuzviisa mumahwindo
uye mumwe mubvunzo
apo mutambo kana kuisa uchindibvunza kuti ndiise directx iiswe ???
Kazhinji, mutambo pachawo unoisa iwo (iyo directx iwe yaunoda kuitamba). Zvikasadaro, dhawunirodha zvakaparadzana kubva kune yayo yepamutemo peji, riise uye woedza kuisa mutambo. Zviri nyore.
varume veuto vanogona kutambwa here?
Cherechedzai. Isa iyo DEB package uye uwane mutambo mune irwo runyorwa. Kana zvikaonekwa, unogona asi kwete. Zvisinei, kuti haina kuoneka mune PlayOnLinux runyorwa hazvireve kuti haigone kumhanyisa uchishandisa Waini, asi kuti hapana mutambo wekumisikidza script pasi pePlayOnLinux. Saka, kana ikasaoneka, edza kuiisa yakananga kubva kuWine.
Ndanga ndichiishandisa kwechinguva ikozvino, uye inovimbisa 😉
Mifananidzo yekudzidzisa ndeyekare masokisi, iwo anobva kune mamwe mavhezheni ekare kare.
Kana pasina script yekumisikidza yemutambo kana kunyorera, unogona kudhawunirodha iwo ari kuyedzwa nenharaunda mumaforamu ePlayOn Linux.
wilyer vilchez akadaro
Inondibvunza iyo cd-rom uye ipapo haina kurodha sezvandinoita
Pindura wilyer vilchez
Zvakajeka. Iwe unofanirwa kukwirisa cd mune dhairekitori pane rako rakaomarara diski (iri maitiro akafanana ne "virtual disk" iwe yaungangodaro wakashandisa muWindows). Zvikasadaro, iwe unofanirwa kuisa iyo CD. 🙂
Kuisa ISO mune dhairekitori, unofanirwa kushandisa rairo:
sudo kukwira -o chiuno disco.iso / midhiya / iso
Zviripachena, iwe unofanirwa kushandura disco.iso uye / media / iso kune zvinoenderana newe.
Andrea zvinoreva zita akadaro
Shamwari, ndinowana chinhu chimwe chete chandinoita, ndiudze
Mhoroi, ndine dambudziko nePlayOnLinux, masvondo mashoma apfuura ndanga ndine matambudziko nekuti hofisi yakavharwa ndisingatarisiri saka ndakafunga kubvisa hofisi yePalyOnLinux, ikozvino pese pandinotanga UBUNTU yangu, zvinoita sekunge iko kunyorera hakugone kutakurwa uye kunondiratidza imwe yeimwe MicrosoftOFFICE mapakeji. Ini ndato bvisa nemaoko ese maMicrosoftOffice maforodha aive muPlayonLINUX, ndakabvisa zvimwe zvekuuraya mu PLAY dhairekitori kwavakandipa zita rekuti HOFISI kuitiswa, ndakaibvisa zvachose ndikaimisazve uye inoramba yakadaro ... chero pfungwa?
ndobvunza sei cd rom chandingaite ndiudzewo ndapota
Ini chaizvo handizive kuti ndingakubatsira sei padambudziko rako.
Rombo rakanaka! Mufaro! Paul.
ponesa iyo LOL inosimudza asi ini handisi kuiwana neinjini yekutsvaga kana nemitambo, ndinozviita sei?
Pindura kune dementoid
Mhoro, wakanyatsotsanangudza iyo posvo ... Zvakadaro, hazvisi zvehunyanzvi kutaura ... Ko kana tikashandisa netbook? Ndingaite sei mutambo unoda maCD akawanda pasina iwo? Mubvunzo ndewokuti, sei panguva yekutamba pendrive kwandakapisa maCD emutambo asingandizive ... Chokwadi, ndine netbook ... ndakatsvaga mumaforamu akasiyana asi ...
Ndatenda pamberi, mumiriri
Mhoro Guille! Mutambo wakadii !!
Kana ini ndanzwisisa mubvunzo wako nenzira kwayo, iwe unoda kuziva kuti ungatambe sei mitambo iyo, sezvaunenge uchiitamba, inokumbira iwe kuti uise madiski matsva. Ini zvechokwadi handina PlayOnLinux yakaiswa. Yakave nguva yakareba kubvira pandakanyora chinyorwa. Nekudaro, maitiro angu ekutanga angave ekuedza kukwira iyo ISO yedhisiki kana mutambo uchinge waida. Ini ndinofungidzira kuti muPlayOnLinux kana marongero ewaini panofanira kuve nesarudzo yekutsanangudza kuti yaiverenga iyo nzira sekunge yaive CD / DVD. Zvisinei, chingave chinhu chine musoro ... asi, zvakare, ini handina chirongwa chakaisirwa kuchisimbisa.
Kana iwe ukaita chero kufambira mberi kana kuuya kumhinduro kuchinetso, ini ndichaonga icho kana iwe uchichigovana icho nesu tese.
Esteban Kluser akadaro
Shamwari, ndinokutenda zvikuru nekupa kwako uye kuzvipira. Changu kufarira kunze kwekumhanya mimwe windows mitambo ndeye kuziva kana iyo MU V2 inomhanya, ndatenda Kwaziwai
Pindura kuna ado
Chii chinonzi gehena MU V2 ??
Freddy johan akadaro
sei zvichitaridza kwandiri kuti unoda cd rom
Pindura kuna freddy johan
Amaranta Rosnovsky akadaro
Shamwari, kumusoro uko kune dzimwe sarudzo (kana iwe uchitsvaga mutambo) uye ipapo unofanirwa kubaya pa "hazvidi kuti ushandise CD" uyezve pa "chirongwa chekuyedza" iwe unowana zvimwe zviratidzo, unobvuma ivo uye iyo yaunosarudza: 3
Pindura kuna Amaranta Rosnovski
nekuti iwe waifanirwa kunge wakaiisa «MUKUEDZESA» unofanirwa kuiisa mukati "HAPANA CD RINODIWA" mutambo wawakaisa unoda CD KANA cdrom kuti ikwanise kuiisa
Hei, iwe hauzive maitiro aunogona kudzoreredza mutambo usina kuutora zvakare? (mune yangu, League of legends)
Rafael Valza akadaro
shamwari ndinosarudza mutambo wandinodzvanya kuisa asi hapana chinoitika uye kana zvikaitika ndinozvipa kumberi asi zvakafanana hapana CHINOITIKA
Pindura RAFAEL VALZA
Pane chero munhu anoziva kuisa mutambo unosanganisira maviri iso? Ini ndinobvunza nekuti ini ndinokwidza yekutanga uye ndopa inoitisa uye inotangisa kumisikidza. Dambudziko rinomuka kana rikandikumbira dhisiki maviri, iri mune iso mbiri asi ini handizive kuti ndozvibhowa sei. Pane mumwe munhu angandibatsira here?
Mhoro ndinoda kuisunungura nekuti inondikonzera matambudziko asi hapana nzira uye chakanyanya kundishayisa kuwana waini ndibatsireiwo.
Pindura kuna sabrina
Mhoro pandinovaodhaunirodha havaonekwe pakutanga nekuti vhezheni yacho ndeye 3.4 ndapota ndibatsireiwo
Ndokunge, ndinodhawunirodha mutambo asi hazviuye pakutanga kana pa desktop iyo yandinobatsira ndapota.
Mhoro mubvunzo nekuti kana ini ndiine mutambo wakaiswa munzira yekudimbudzira ndinoupa kuti uvhure uye hauvhure kwete kana pandinoapa kuti ndivhure anondibatsira
Mhoro download vagari vakaipa 4 vachinwa, ndakaivhura newaini uye inononoka,
Playonlinux inogona kumhanyisa mutambo uchiri kunwa.
Shandisa ubuntu 12.4
Beta nyowani yeFirefox 4
Hycons: akanaka icon pack ye KDE